Booqo Lago di Como | Wararka Safarka
Booqo Lago di Como
Haddii ay jiraan muuqaal haro qurux badan oo ku yaal Talyaaniga, taasi waa Lago di como. Halkan wax walba oo ka mid ah ayaa la isku daraa: qurux badan dabeecadda, xarrago, haybad iyo diyaarad caalami ah. Xaqiiqdii, George Clooney wuxuu halkan ku leeyahay guri laakiin sidoo kale qoysas badan oo sharaf leh oo ka yimid Talyaaniga ama Switzerland.
Xaqiiqdii waa inaad taqaanaa Lago di Como, markaa haddii aad qorsheyso safar mustaqbalka ah oo aad ku tagto Talyaaniga waxaad ku dhex lugeyn kartaa hareeraha hareeraha iyo dhammaan gobolka quruxda badan ee Como iyo deriskeeda, Lecco. Aan aragno waa maxay howlaha, meelaha iyo geesaha ay tahay inaan booqano.
2 Dalxiiska Lago di Como
Harada waxay ku taal gobolka Como, ee gobolka Candela, Talyaaniga, ugu yaraan 200 mitir oo joog sare. Waxay leedahay a dusha sare ee 146 kiiloomitir oo laba jibbaaran oo qoto dheer in ka badan 400 mitir. Sidaas darteed, waa a haro runtii qoto dheer waana harada saddexaad ee ugu weyn dalka.
Harada Waxay leedahay saddex gacmood: Como, Lecco iyo Colico. Marka la eego, gacanta Como waxay leedahay saddex qaybood oo kale tan koowaadna waxay u dhigantaa magaalada Como. Jasiiradda Comacina, midka kaliya ee leh harada oo ilaaliya burburka Roomaanka. Xeebta harada waxaa ku yaal tuulooyin badan oo guryo qurxoon iyo milyaneerro ay leeyihiin fannaaniinta adduunka sida kan aan magacaabay, Clooney, ama xitaa Madonna.
Magacyadan waa kuwo casri ah, laakiin quruxda harada waa mid taariikhi ah sidaa darteed tirooyin taariikhi ah ayaa sidoo kale jeclaaday muuqaalka: Bonaparte, Verdi, Winston Churchill, Da Vinci... Dabcan, filimaan aan tiro lahayn iyo taxanaha TV-yada ayaa la duubay.
Dalxiiska Lago di Como
Waxaan ku bilaabi karnaa sida gacanta, loogu talagalay magaalooyinkeeda. Como Waa qaddar rabbaani ah, oo leh Barxadda Cathedral, dhisme dhisme, Dabaqa Degmada ama Broletto. Cathedral-ku wuxuu ku dhexjiraa qaabka Gothic-ka wuxuuna ku leeyahay shaqooyin farshaxan meel kasta. Waxay ka bilaabmaysaa dhammaadkii qarnigii XNUMX-aad inkasta oo la dhammaystiray oo keliya badhtamihii qarnigii XNUMX-aad.
Laga soo bilaabo Como mid ayaa dalxiis u raaci kara la soco tuulooyinka xeebta ku yaal, tusaale ahaan, kuwa caanka ah Bellagio oo leh jardiinooyinkeeda iyo villa-kiisa, oo caan ka ah adduunka oo dhan: Villa Este ama Villa Olmo, maanta hudheelo shan xiddig leh. Haddii aad tagto guga ama xagaaga waxaad doorbidi kartaa inaad socoto si aad uga dhex sameyso inta quruxda badan beeraha nasashada ee Como. Tan ugu weyn waa Parco Spina ama Parco Sovraccomunales Brughiera Briantea oo dhan 23 kun hektar.
Haddii taas lidkeeda aad jeceshahay farshaxanka iyo dhaqanka markaa qaar baa jira matxafyada xiiso leh Como waxay leedahay afar madxaf oo dowladu leedahay iyo matxafyo kale oo gaar loo leeyahay oo uruurinno kaladuwan leh. Kuwa ugu horreeya waxaa ka mid ah Matxafka qadiimiga ah, Matxafka Garibaldi taariikhda, the Pinacoteca Civica iyo Matxafka Tempio Voltiano kaas oo u heellan qoraa caan ah Alessandro Volta. Sidoo kale, xiiso leh, ayaa ah Madxafka Como Silk.
Sannadka oo dhan waxaa jira dhacdooyin kala duwan oo gaar ahaan qurux badan yihiin suuqyada halkaas oo ay yaalaan waxyaabo qadiim ah, alaab guri iyo dhar marwalba ah. Waxaa sidoo kale jira maydhashada roman-ka qadiimiga ahXaqiiqdii, dhaxalka Roomaanku wuxuu ku yaal magaalada lafteeda iyo hareeraheeda. Cimilada khafiifka ah ee wanaagsan ayaa mar ku guuleysatay Pliny oo Yaryar, tusaale ahaan, sidaas darteed Roomaankii hodanka ahaa sidoo kale waxay ka dhisteen guryahoodii madaddaalada halkan.
Waxaa raacay qarniyadii xigay reeraha aristocratic-ka ah ee Como iyo Milan, marka maanta waxaa jira Villas Vigoni, Villa Salazar, La Gaeta, La Quiete, Palazzo Manzi, Villa D'Este ... Dhamaan guryo taariikhi ah kuwaas oo ilaaliya shaqadooda farshaxanka. Tirada goobaha aad ku arki karto Como waa wax layaableh markaa taladaydu waxay tahay inaad cilmi baaris fiican ku sameyso khadka tooska ah si aadan u seegin wax aad jeceshahay oo aad aakhirka u aragto wax aan dantaada aheyn.
El gacanta lecco Isaguba wuxuu leeyahay tiisa sidoo kale, oo leh meelaha ugu sarreeya ee Resegone iyo Grigna aragga. Ma yahay magaalada alpine Waxay leedahay aqoonsi dhaqameed badan waxayna ahayd mid ka mid ah xarumihii ugu horreeyay ee warshadeed dalka Talyaaniga ee loogu talagalay birta iyo birta, hawshaas waxay socotay ilaa qarnigii XNUMXaad ee fog. Waxay leedahay boodh qurux badan oo aad u jaceyl ah una dhow tuulooyinka xeebta aad u qurux badan sida Varenna, Mandello ama geesaha barafka ee Valsassina.
Varenna iyadu waa qurux iyo yar tuulada kalluumeysiga taas oo ku taal badhtamaha harada kuna caan baxday miinooyinkii duugga ahaa ee madow iyo caddaanba u dhowaa dhulka quruxda badan ee Brianza. Waa goob jidad cidhiidhi ah oo u dhaadhaca harada iyo socod qurxoon oo qurux badan, qaar badani waxay ugu yeeraan si fudud "dariiqa jacaylka." Waxa kale oo jira afar kaniisadood oo duug ah, oo qaabab kala duwan leh, iyo qaar ka mid ah villa qurux badan oo hadda noqday hudheelo xul ah.
Laga soo bilaabo Varenna, markeeda, waxaad u samaysan kartaa baxsi Fiumelatte, oo loogu magacdaray nooc xumbo cadaan ah oo ka soo baxa guga godka dhexdiisa isla markaana waqti go'an oo sannadka ah ku wareegaa harada. Sidoo kale waa dhow yahay Qasriga Vezio, oo ku yaal Esino Lario, oo leh munaaraddii dhexe, guriga boqoradda Lombard Teodolinda. Maanta waxay u furan tahay dadweynaha oo laga bilaabo halkaas aragtida harada waa wax la arko.
Tuulada MandelloDhinaceeda, waxay ku taal buuraha qaar badan oo ka mid ah kuwa booqda Lecco ayaa safarka ku dara. Waxay u qalantaa booqasho loogu talagalay quruxda alpine muuqaalkeeda, xeebaheeda iyo howlaha biyaha ee xilliyada, baararka iyo makhaayadaha iyo dhacdooyinka muusikada iyo Motocross.
Meelaha kale ee suurtogalka ah ee la tegi karo, oo leh waqti iyo abaabul, ayaa ah Dooxada San Martino iyo Valee d'Intelvi. Midka ugu horreeya waxaa la helaa marka Lago di Como uu ku shubo webiga Adda. Waa doox udhaxeysa aagga Milaano iyo Jamhuuriyadda Veneto, qurux badan, dhulal qadiimi ah, taariikh iyo dhaqan ka buuxo. Waxay leedahay haro u gaar ah, Lake Garlate, dhagxaan buuro leh, buuro cagaaran, Rossino Castle, oo ah guri duug ah oo qarnigii XNUMX-aad leh frescoes qarnigii XNUMX-naad iyo inbadan.
Ugu dambeyntiina, markaad si wanaagsan u abaabusho magaalooyinka ama tuulooyinka aad booqanaysid, waa inaad taas ogaataa sidoo kale waxaa jira safarro doonyo badan oo ka bilaabanaya Como waxayna ku ciyaaraan meelo sida Blevio, Tomo, Moltrasio iyo Cernobbio, oo iyaguna ah jidadka dabiiciga ah qurux badan in la sameeyo maalin qorax leh, Caminos de Vía Regina, tusaale ahaan, dhaqan ahaan aad u wanaagsan, iyo in funicular ee Brunate, laga bilaabo qarnigii XNUMXaad, wuxuu ku siinayaa aragtida ugu fiican ee harada iyo hareeraheeda. Layaab ma leh, waxay kuu geynaysaa waxa loo yaqaan "balakoonka Alps."
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Booqo Lago di Como
Piazza Navona oo ku taal Rome